Jereo ny hatsaran'ny fitsangantsanganana an-dranomasina Mediterane | Vaovao momba ny dia
Fitsangantsanganana an-dranomasina Mediterane
Susana Garcia | | Sambo fitsangantsanganana, General
Raha tianao ny hevitra momba maka vakansy amin'ny fitsangantsanganana an-dranomasina mediteranitra lehibe, avy eo diniho izay lazainay aminao. Ny fitsangantsanganana an-dranomasina Mediterane dia mahazatra amin'ny zavatra maro. Misy karazana làlana fitsangatsanganana rehetra, ny fijanonana dia natao tamin'ny toerana tena mahaliana toa an'i Barcelona, ​​Santorini na Marseille ary afaka mahita hetsika sy fialamboly maro karazana ao anaty sambo ihany koa isika.
manao Ny fitsangantsanganana an-dranomasina Mediteraneana dia zavatra ataon'ny olona an-jatony isan-taona. Toerana misy toetr'andro mahafinaritra sy toerana be dia be feno tantara sy hatsarana voajanahary mahasarika mpizahatany maro. Fa raha handeha handamina ny fitsangantsanganana an-dranomasina ianao dia tokony hahafantatra zavatra vitsivitsy, mba tsy ho very amin'ny tolotra sy zotra rehetra.
1 Rahoviana no handeha ho any Mediterane
2 Inona no entina amin'ny fitsangantsanganana an-tsambo
3 Karazana fitsangantsanganana an-dranomasina Mediterane
4 Fiantsonana lehibe amin'ny fitsangantsanganana an-dranomasina Mediterane
4.3 Valletta any Malta
Rahoviana no handeha ho any Mediterane
Ny Mediterane dia manolotra toetrandro mahafinaritra mandritra ny taona. Mafana be ny fahavaratra amin'ny fotoana sasany, ka ny fotoana tsara indrindra dia ny fararano sy lohataona foana, rehefa somary milamina kokoa ny toetr'andro. Raha handeha hitety ny Ranomasina Mediterane isika dia maro ny olona misafidy fahavaratra, noho izany matetika dia avo kokoa ny vidiny amin'izao fotoana izao, satria saika ny olon-drehetra dia manana fialantsasatra ary afaka mankafy ny toetr'andro tsara. Na inona na inona vanim-potoana hidiranao dia azonao atao ny mankafy ireo dobo fitsangantsanganana an-tsambo ary milomano tsara any amin'ireo seranana sy fiantsonana samihafa.
Inona no entina amin'ny fitsangantsanganana an-tsambo
Amin'ny sambo dia afaka manao zavatra maro ianao, noho izany dia zava-dehibe ny fiheverana izay tokony ho entintsika. Mila manana foana sunscreen, satria mahazatra ny filentehan'ny masoandro sy ny fampiasana ireo dobo, ho fanampin'ny zava-misy fa ny masoandro mediteraneana dia afaka mana-maso antsika haingana. Etsy ankilany, tsy maintsy mitafy akanjo milay sy akanjo mihaja isika amin'ny fotoana manokana. Ilaina ny kiraro ahazoana aina, satria any amin'ny seranana dia matetika ny mandeha an-tongotra na mandeha mitsangatsangana mandritra ny andro fijanonan'ny sambo fitsangantsanganana.
Karazana fitsangantsanganana an-dranomasina Mediterane
Any amin'ny Ranomasina Mediterane dia afaka misafidy faritra roa miavaka tsara ianao. Amin'ny lafiny iray dia ny Mediterane Andrefana, izay misy ny morontsirak'i Espana, miaraka amin'ireo nosy Balearic malaza, France ary Italia. Etsy ankilany dia manana atsinanan'i Italia isika, ireo nosy Grika ary Torkia. Izy ireo koa dia tena mahaliana nefa toerana samy hafa tanteraka. Ny fomba tsara hisafidianana faritra iray na faritra hafa dia amin'ny fieritreretana karazana tanàna irintsika ho hita. Barcelona, ​​Marseille, Ibiza na Roma aza dia ampitahaina amin'ny toerana toa an'i Istanbul, Venice na Santorini.
ny Ny zotram-pitaterana an'ny orinasa tsirairay dia mampiseho mazava amintsika ireo toerana izay hitsidika azy, ny fotoana fitsangantsanganana an-tsambo sy ny fijanonana ary ny fitsangatsanganana mety hitranga. Raha vao misafidy faritra iray isika dia tsy maintsy misafidy zotra iray ao. Ny zavatra voalohany dia ny fiheverana ny andro ananantsika. Avy eo, eo amin'ireo mety ho làlana fitsangatsanganana, safidio izay tianao indrindra. Jereo ny fijanonana ataon'izy ireo ary koa ny fotoana ahafahanao mankafy ny tanàna sy ny fitsangatsanganana azo atao ao amin'io faritra io.
Fiantsonana lehibe amin'ny fitsangantsanganana an-dranomasina Mediterane
Amin'ny fitsangantsanganana an-dranomasina Mediterane mizana miavaka sasany manintona ny saina betsaka ho an'ny mpizahatany ary izany matetika no mahasarika ny sambo fitsangantsanganana. Tsy maintsy jerenao izay mety ho fijanonana satria amin'ny fitsangantsanganana iray dia afaka mahita tanàna sy toerana mahaliana maromaro isika izay tsy hamela antsika tsy hiraharaha ary ity no mahafinaritra indrindra amin'ireo fitsangantsanganana an-dranomasina.
Ity tanàna renivohitra ity dia iray amin'ireo toerana fijanonana ho an'ny sambo fitsangantsanganana maro any amin'ny Nosy Balearic. Ao an-tanàna ianao dia afaka mahita toerana toa ny Basilika katolika malaza any Santa Maria fantatra amin'ny anarana hoe La Seu amin'ny fomba Levantine Gothic. Any amin'ny moron'ny Helodrano Palma no misy azy ary na ny ivelany na ny ao anatiny dia tena mahavariana. Ao amin'ny tanàna dia tokony ho hitanao koa ny Castle Bellver tsara tarehy, izay manana drafitra boribory mahaliana. Ny zavatra hafa azo tsidihina dia ny Palacio de L'Almudaira na mankafy ny moron-dranomasina sy ny fidirana eo aminy.
Ity dia iray amin'ireo tanàn-dehibe izay mety ho isan'ireo làlana fitsangantsanganana an-tsambo. Venice dia manolotra toerana mahaliana antsika Kianja St. Marka miaraka amin'ny Basilica, ny Doge's Palace na ireo fantsona mahafinaritra. Ny tetezana Rialto Bridge na ny Bridge of Sighs dia toerana be tantaram-pitiavana izay tsy tokony halaina.
Valletta any Malta
Ny nosy kely any Malta dia mety ho toerana iray hafa atolotry ny sambo fitsangantsanganana. Nosy iray manolotra antsika toerana manokana toy ny tanàna mahafinaritra an'i La Valletta, miaraka amin'ireo arabe taloha sy ny hatsarany, na Mdina, antitra loatra. Azontsika atao ihany koa ny mahita ny nosin'i Gozo miaraka amin'ny torapasika sy ny hantsana na ny nosy Comino miaraka amin'ilay Lagoon Blue malaza.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Fitsangantsanganana an-dranomasina Mediterane
Loharanon'ny renirano Mundo
Manao ahoana ny tolotra any Portugal